Tilmaame-Laga bilaabo Naqshadeeynta si ay ugu Dhaqaaqdo Xaafadaha Deegaanka Google Raadinta Raadinta Degaanka
Google wuxuu soo saarey algorithm kakooban oo lagu falanqeynayo natiijooyinka, hoos udhaca xaafadda oo mid ka mid ah uu fuliyo su'aalaha. Horumarintu waxay leedahay faa'iido u lahaanshaha isticmaalaha iyo ganacsatada. Ugu horreyntii, Google wuxuu isku xiraa shakhsiyaadka shakhsiyaadka ah ee ganacsiyada ka jira xaafadda. Tan labaad, milkiilayaasha ganacsigu waxay ku raaxaystaan ​​gaadiidka waaweyn xataa iyada oo miisaaniyad yar - reinigungsofferten. Natiijooyinka juquraafi ahaan waa kuwo aan fiicneyn, shirkaduhuna waa inay ku dadaalaan dadaal dheeri ah ka hor intaanay gaadhin muuqaalka.
Igor Gamanenko, Maareeyaha Guusha Macaamiilka Semt , wuxuu halkan ku leeyahay hage ku habboon arrintan.
Google My Basis Business
Google My Business waa degmo sahlan mashiinka raadinta istaraatiijiyada suuq-geynta oo hubinaysa in kor loo qaado muuqaalka raadinta. Hubi in dhammaan macluumaadka la xiriira ganacsiga la heli karo oo buuxi inta ugu badan ee suurtogalka ah. Sidoo kale, ku dar qalabyada muuqaalka sida sawirada ama fiidiyowyada
Qabashada hoos u taxaalka liiska
Marka lagu daro hubinta bogga internetka, waxaa jira waxyaabo kale oo muhiim ah oo loo baahan yahay in la tixgeliyo ka hor inta aan laga walwalin sida Google Ganacsigeenu uga caawin doono qiimeynta.
Samee websaydh. Looma baahna, hase yeeshee waxay gacan ka geysan kartaa in lagu daro maamulka, oo si habboon u xajiya xaafad gaar ah.
Schema.org Habka Local waa inuu u hoggaansamo siduu websaydhku uuga muuqanayo matoorada raadinta si wadajir ah. Sidoo kale, ku dar faylka KML
Aqoonsiyada Warbaahinta Bulshada..Ka dalbashada warbaahin bulshadeed ee xulasho kasta oo hubso inaad si joogto ah u cusbooneysiiso.
Isdilid. Xaqiiji in cinwaanka iyo macluumaadka ku jira ganacsigu uu yahay mid isku mid ah dhammaan meeraha oo dhan oo sheegaayo astaanta
Dhibaatada Xuduudda Xuduudaha
Hal dhibaato leh natiijooyinka raadinta ee xaafadaha waa habka Google loo baaro raadinteeda. Waxa laga yaabaa inay natiijooyinka ka soo baxdo ganacsi ka baxsan xudduudaha ama ka tagto qaar ka mid ah goobta la cayimay. Dhibaatadu waxay ka timaadaa shuruudaha cayiman iyo qeexitaaneed ee loogu talagalay xuduudaha. Tixraacyada aan khaldadka ahayn ee ganacsiyada maxaliga ah ayaa sidoo kale ku daraya dhibaatada.
Google wuxuu sii wadaa inuu isku dayo inuu hubiyo in uu hagaajiyo fahamka xuduudaha xaafadaha. Laakiin ilaa inta, meelaha jimicsiga ee xaafadda dhexdiisa ah kuma filna inay damaanad qaadaan natiijooyinka raadinta
Waxyaabaha soo socdaa waa qaar xeeladaha wax soo saarka maxaliga ah oo kaa caawin doona hubinta in ganacsiga uu ka muuqdo natiijooyinka raadinta xaafadda:
Waxaa jira ikhtiyaarka sharaxaadaha ee ku xiga magaca shirkada mulkiilaha uu ku qori karo magaca xaafada
Isticmaal isbeddelka magaca xaafadda sida badanaa loo yaqaan
Ku dar magaca xaafada oo ku yaala goobta shaqada ee Google My Business
U hubso in dhammaan boggaga cinwaanka bogga ay ku jiraan magaca xaafadda.
Samee bogga loo qoondeeyay bogga internetka oo leh magaca goobta
La tasho Google MapMaker si aad u aragto qeexitaannada xuduudaha sida Google ee loo qaato.
Dhaqannada ugu Fiican
Waxa jira walxaha socota ee milkiilaha ganacsigu u baahan yahay inuu sii wato haddii ay tahay inay sii wataan ama hagaajiyaan suuqgaynta raadiyaha maxalliga ah dadaalka
Ku dhiirrigel macaamiisha inay u soo diraan dib u eegis wanaagsan oo ku saabsan ganacsiga. Dib u eegista ku jirta Google My Page ayaa leh awood ka badan tan kale ee bogga saddexaad.
Isticmaal gundheer magacyada sida WhiteSpark si aad u ogaatid habka ugu wanaagsan ee lagu qeexi karo goobta hadda. Markaad martid martida, xaqiiji inaad ku darto magaca xaafadda ee bogga sharaxaadda
Abaabid blog ah oo ka samee dhowr qaybood oo ku saabsan warbaahinta bulshada adoo soo diraya waxyaabaha ku haboon dadka dhageystayaasha ah ee bartilmaameedsanaya.
La shaqee hay'ad madax-bannaan, oo khibrad u leh wax-qabadka maxalliga ah. Iyadoo lagu saleynayo miisaaniyadda iyo ilaha, hay'addu waxay noqon doontaa doorashada ugu fiican.